Faah-faahin qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho iyo maamulka gobolka oo ka hadlay – Hornafrik Media Network
Somali NewsTOOSHKA HORNAFRIK
By Liibaan Nuur	 On Jan 8, 2020
Maamulka gobolka Banaadir ayaa faah faahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay qaraxii barqanimadii maanta ka dhacay meel u dhaw Bar-koontorool oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya, kaas oo ku dhaw taalada Sayidka.
Waxaa uu sheegay in xilliga garaiga uu qarxayey uu ku jiray safka baarista, isla markaana ay ku geeriyoodeen seddax qof lix kalena ay ku dhaawacmeen.
Markii laga soo tago faah-faahinta maamulka gobolka waxaa goobta ku burburay ugu yaraan 8-gaari oo ay ku jireen mootoyinka Bajaaj-ta, waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac, sida la sheegay ka badan khasaaraha uu sheegay afhayeenka gobolku. Walow aan weli si rasmi ah loo xaqiiji karin tirada guud ee dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxaas.
Sidoo kale ilo caafimaad ayaa noo sheegay inay lasoo gaarsiiyey afar qof oo dhimasho ah iyo 15 kale oo dhaawac ah.
Dhinaca kale Al-Shabaab ayaa sheegtay mas’uuliyada qaraxa, waxayna war ay soo saareen ku sheegeen inay ku dileen mas’uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka, isla markaana uu jiro bur-bur hantiyeed oo soo gaaray goobihii ka agdhawaa bartilmaameedkooda.
Sidoo kale waxaa xusid mudan in maanta oo kale sanadkii hore ay Al-Shabaab isla goobtaan qarax is-miidaamin ah ka fuliyeen, kaas oo xoog ku soo gaalay goobta iyadoo ay rasaaseynayeen ciidamada ammaanka, kaas oo xilligaas sababay khasaare iskugu jiray dhimasho, dhawac iyo burbur soo gaaray guryo iyo goobo ganacsi oo ka ag dhawaa barta koontorool ee ciidamada ilaalada madaxtooyadu ay ku suganmyihiin.
Qarax xoog leh oo goor dhaw ka dhacay Muqdisho
Guddiga doorashada Galmudug oo shaaciyey qorshahoda soo xulidda xildhibaanada dhiman